Thanksalot for the post. As I had graduated from Insein GTI, I feel the same way as you too. Now, not only GTI is disappear, our school building also gone.
အင်း အခု တော့ အင်း စိန် ဂျီတီ အိုင် ကျောင်း ခမျာ မှာ တော့ ဘဝ တပါး သို့ ပေါင်း သွား ရ လေ ပြီ ။
ဟုတ်ပဗျာ.. စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းကာလမှာ ယာယီထောင်တောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်..ကျနော်များ ဂုဏ်ယူဝံ့ကွားစွာ တက်ခဲ့တဲ့ အဆောင်အဆောင်တွေဟာဖြစ်လည်း.. အကျဉ်းစခန်းများဖြစ်သွားခဲ့သေးတယ်.. Mandalay G.T.I လည်း ဒီလိုပါပဲဗျာ.. Mandalay ဆင်းများ အမိကျောင်းတော်ကြီးကို အလွှမ်းပြေ သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်.. ကိုယ့်မိန်းမ မီးဖွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်.. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်.. ခလေးမွေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်.သွားနိုင်ပါသေးတယ်.. ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့.. အမျိုးသမီး ဗဟိုဆေးရုံကြီး ဖြစ်သွားလို့ပါ..
ရွှေညဏ်တော် စူးရှတာကတော့ ပြောမနေနဲ့ .. စနစ်တကျကို ဖျက်ဆီးဖို့ ကြံခဲ့တာပါ.. ဒါတောင် မောင်ခင်ညျွန့် ကို မောင်သောင်းက မလှန်နိုင်လို့
BE ဆိုတဲ့ ဟာလေးက တဲ့တဲ့လေးကျန်တာ.. အဲ့ဒိလိုမဟုတ်ရင် .. B-Tech to M-Tech လုပ်ဦးမယ့် စီမံကိန်းဗျ.. Engineer ဆိုတာကြီးကို သူတို့က မုန်းတာ.. စိတ်ထဲက တော်တော်လေး ခံစားနေရလို့ ရေးမိတာဗျာ.. ဒီထက်ပြောရရင်.. post တစ်ခုစာ အတိအကျ ကျနော်ရေးနိုင်ပါတယ်..
ဒီစာကို ကိုလူအေးထဲမှာ ရေးမိတာ.. ခွင့်လွှတ်နော့..
Really Appreciate this blog post, can you make it so I receive an email when there is a
My weblog - muna.4mystudent.com
marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could look out foralot more of your respective interesting content. Ensure that you update
my webpage: www.art-nation.ru
Visit my weblog: aeropuerto valencia aena